Agaasimaha Hay,ada Samafalka ee SDWO Relief Project oo deeq caawimo ah gaadhsiiyey laba hablood oo ku dhibaataysan Hargeysa
SDWO (Hargeisa 15/02/2012) Agaasimaha Hay,ada Samafalka ee SDWO Relief Projects Sheekh Yusuf Waraabacade ayaa maanta gaadhsiiyey deeq lacageed oo dhan $600 doolar laba hablood oo ku dhibaataysan magaalada Hargeysa. Deeqdan ayaa naga soo gaadhay muwaadin degan dalka Canada isagoo uu muwaadinkani ugu ku soo kaalmeeyay labadan hablood ilaahay ha ka jazaa'i siiyee.
Deeqdan ayaa $400 oo doolar waxa la gaadhsiiye Hodan Cabdi Cali oo ah 16 jir ku dhalatay Indho la,an iyo dheog la,aan ka dibna dab ku dhacday sanadkii hore oo si xun u gubatay cawimooyin badan oo soo gaadhayna ka dibna lagu daweeyay dhakhtarka Manhal ee Hargeysa. Reerkan ayaa ka mid ah dadka danyarta ah eek u dhibaataysan xaafada Daami ee magaalada Hargeysa
Waxa iyadana maanta $200 oo doolar la gudoonsiyey Faysa Cabdilaahi Askar oo ah gabar yar oo 17 jir ah oo ku dhalatay iyadoo dhamaan naafo ka ah labada gacmood iyo labada lugood oo degan buul yar oo ku yaala xaafada Goljano ee magaalada Hargeysa.
Hadaba Muwaadinkan oo hor ilaahay ugu soo gargaaray labadaa hablood ee ku dhibaataysan Hargeysa waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ka abaal mariyo if iyo aakhiro, halkii uu ka soo saarayna wax ka badan oo uga khayr badan uu ugu bedelo. Aamiin.
Agaasimaha SDWO Relief Projects Sheekh Yusuf ayaa baaq u diray kana codsaday qurbojoogu inay u naxaan dadkooda ku dhibaataysan dalka gudahiisa wixii ay dhaamaana ay ku soo taakuleeyaan oo ay ku darsadaan miisaanka xasanaadka.
$600 ee doolar ayaa deeqaha sida tooska ah lagu soo hagaajiyey SDWO Relief Project oo la gaadhsiiyey dadkii loola soo niyooday isku geyntooda ka dhigaysa $18461 doolar. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dhamaan muslimiintaas deeqaha na soo gaadhsiisay uu miisanka xasanaadka ugu darro. aamiin.
SDWO Relief Project marwalba halku dhigiisu waa Daawanaayoow waa Dadkaagii, Daawanaayoow Waa Dalkaagii
Hadii aad rabtid inaad SDWO aad ku soo hagaajisid sadaqadaada si aanu halkan ugu soo bandhigno sawirada marka la gudoonsiinayo, si aad u ogaato in sadaqadaadii gaadhay halkii aad u soo niyeysay, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa samafal@sdwo.com ama Guled@sdwo.com